विद्यार्थीलाई घर भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउन नेविसंघको माग ! « Online Tv Nepal
विद्यार्थीलाई घर भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउन नेविसंघको माग !
Published : 22 March, 2020 5:41 pm
नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले उपत्यकामा भाडामा बस्ने विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटको अवधिभर ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आइतबार नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यस्तै उपत्यका बाहिर घर भएका र घर जना इच्छुक विद्यार्थीलाई निःशुल्क घर जाने व्यवस्था गर्न नेविसंघको माग छ ।
‘सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सहुलियत वा कर छुट दिएर कोरोनाको संकट अवधिभर इन्टरनेट सेवा निःशुल्क उपलब्ध गरियोस् । भारतमा कोरोनाको प्रकोप बढेकाले भारतीय नाकाको आवत जावत पूर्ण रुपमा बन्द गरियो,’ अध्यक्ष ढुंगानाद्ववरा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुको कृतिम अभाव, महंगी र कालोबजारीको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नेविसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।